Cabitaano Caafimaad Qaba: 7 Ikhtiyaar oo Wanaagsan Oo Lagu Darso Cuntadaada | Ragga Stylish
Ma rabtaa inaad ku darto cabitaano caafimaad leh cuntadaada? Marka ay timaado cunista cunto caafimaad leh oo nafaqo leh, wax ay tahay in qof walbo daba galo, cabitaanku waa muhiim sida cuntada oo kale.
Marka loo eego halkan waxaan kuugu keenaynaa xulashooyinka ugufiican ee aad ku weheliso cuntooyinkaaga ama si fudud aad ugu noolaato biyo. Cabitaano caafimaad leh oo kaa caawin doona inaad hagaajiso qorshahaaga cunista haddii aad u isticmaasho inaad ku beddesho xulashooyinka hodanka ku ah kalooriyada ama aalkolada.
1 Shukulaatada kulul
1.1 Waxa la cuno si loo nasto
2 Khamri cas
3 Cabitaano caafimaad leh oo loogu talagalay cayaaraha
3.1 Borotiin borotiin ah
3.2 Cabitaannada isboorti
4 Cabitaanada caafimaadka qaba faa iidooyinka ugu badan
4.1 Casiirka rummaanka
4.2 Shaah cagaaran
Koob ka mid ah shukulaatada kulul ayaa si fiican loo dareemaa maalmaha qaboobaha. Maxaa intaa ka badan, Cabitaankan waxaa loo tixgeliyaa inuu faa'iido u leeyahay caafimaadka maxaa yeelay waxay kaa caawin kartaa yareynta cadaadiska dhiigga iyo caabuqa, iyo sidoo kale ka hortagga cudurrada kala duwan mahadsanid kaqaybqaadashadeeda antioxidants. Waa in la ogaadaa in haddii aad u baahato inaad nasato, kookaha sidoo kale ay xulafo weyn tahay: shukulaatada kulul waxay leedahay saameyn lagu dejiyo maxaa yeelay waxay kordhisaa heerarka serotonin.
Xusuusnow in shukulaatada kulul ay caafimaad noqoto waa inuu ku jiraa ugu yaraan boqolkiiba 70 kookaha. Haddii ay kugu adkaato inaad hesho noocyo kala duwan oo ah budada kookaha oo leh astaamahan, marwalba waad dhalaali kartaa bar wanaagsan oo shukulaato madow ah. Haddii aad rabto inaad yareyso tirada kalooriyada xitaa inbadan, isticmaal caano aan badnayn.
Waxa la cuno si loo nasto
Fiiri maqaalka: Cunnooyinka walaaca. Halkaas waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarro cunto oo dheeri ah oo kaa caawinaya in dhibaatadan la joojiyo.
Marka laga hadlayo cabitaanka caafimaadka leh waa wax aan macquul aheyn in la xuso khamri guduudan. Isticmaalkeedu wuxuu la xiriiray faa'iidooyin caafimaad oo badan, oo ay ku jirto halista ka hooseysa inuu ku dhaco cudurka wadnaha iyo noocyada kansarka qaarkood. Cabitaanka khamri cas sidoo kale waxay hagaajin kartaa niyaddaada. Caadi ahaan, sida dhammaan cabitaanka khamriga, waa lagama maarmaan in diirada la saaro isticmaalkiisa si dhexdhexaad ah, taas oo macnaheedu yahay in aan ka badnaan laba cabitaan maalintii. Waana in cabbitaanka dhex dhexaadintu ay caafimaad tahay, halka ku xadgudubka cabitaankani uu yeelan karo uun saameyn lid ku ah.
Cabitaano caafimaad leh oo loogu talagalay cayaaraha
Borotiin borotiin ah
Miyaad cabtaa ruxruxa borotiinka tababarka ka dib halkii aad ka cuni lahayd cunto caadi ah? Cabitaannadani waxay si dhakhso leh oo fudud u siiyaan qiyaas wanaagsan oo nafaqooyin ah, sidaa darteed waxay ku habboon yihiin in la cabo socodka. Laakiin iyagu ma caafimaad qabaan? Guud ahaan haa, gaar ahaan marka la barbar dhigo cabitaan jilicsan ama casiir baakadaysan. Kaliya waa inaad xasuusnaataa inaad akhrido calaamadaha marka hore, gaar ahaan haddii aad rabto inaad dufanka iyo sonkorta ka ilaaliso, maxaa yeelay qaddarka, iyo sidaas darteed tirada guud ee kalooriyada, way ku kala duwanaan kartaa xoogaa yar noocyo kale. Dareenkan, Waxaa xusid mudan in noocyada qaarkood ay bixiyaan ruxitaan borotiin dufanku ku yar yahay.
Cabbitaannada isboortiga ayaa waxtar badan leh in dib loo buuxiyo elektroolka ka dib dadaal jidheed oo weyn. Waxay sidoo kale ku siiyaan dheecaanno iyo sonkor, cunsurro jirku u baahan yahay ka dib jimicsi adag. Si kastaba ha noqotee, sida ruxitaanka borotiinka, cabitaannada isboortiga waa in loo hayaa maalmaha tababarka. Si aad ula socoto cuntadaada ama aad u biyo siisid waxaad heysataa xulashooyin kugu habboon, iyadoo biyuhu yihiin kuwa ugu badan ee lagula taliyo iyo cabitaanka ay tahay inuu door weyn ku yeesho qorshahaaga cunista.
Cabitaanada caafimaadka qaba faa iidooyinka ugu badan
Awoodda antioxidant-ka waa hab wanaagsan oo lagu garto cabitaannada caafimaadka qaba, marka laga hadlayo arrintan wax yar ayaa jira oo lala barbardhigi karo casiirka rummaanka. Waxaa ka buuxa antioxidants, midhahan waxaad ku diyaarin kartaa cabitaan aad u wanaagsan caafimaadkaaga. Ku dar baraf si aad hoos ugu dhigto, gaar ahaan xilliga xagaaga. Ma u baahan tahay tamar? Casiirka miraha ayaa ah ilo caafimaad oo aad uga caafimaad badan cabitaanada tamarta, kuwaas oo lagu rakibo kafeyn iyo sonkor. Si kastaba ha noqotee, casiirka waa inuu ahaadaa mid dabiici ah si loo xakameeyo qadarka sonkorta.
Shaaha cagaaran wuu dheereyn karaa nolosha maxaa yeelay cilmi baaristu waxay ku xirtaa isticmaalkeeda qatar yar oo cuduro ah. Waa kuwee? Hagaag, dhammaantood dhammaantood, oo ay ku jiraan cudurrada wadnaha iyo kansarka. Dabcan, si loo helo faa iidooyinkeeda waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro cunto caafimaad leh oo kaladuwan. Haddii kale, saameynteeda waxtarka leh waa la baabi'iyaa.
Dhinaca kale, Haddii aad u raadineyso shaaha dhirta aan kafeyn-kafeega lahayn ee cuntadaada, tixgeli xulashooyinka soo socda:
Rooibos (waxay xoojin kartaa nidaamka difaaca jirka waxayna ka hortagi kartaa kansarka)
Chamomile (wuxuu yareeyaa xanuunka caloosha, gaaska, shubanka, iyo walwalka)
Peppermint (wuxuu yareeyaa xanuunka caloosha iyo madax xanuunka wuxuuna kaa caawinayaa inaad si fiican u neefsato)
Hibiscus (waxay yareyn kartaa cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka)
Passionflower (wuxuu yareeyaa walaaca wuxuuna kaa caawinayaa inaad hurudo)
Valerian (waxay ka caawisaa la tacaalidda hurdo la’aanta, welwelka iyo niyad-jabka)
Dhammaan cabbitaannada caafimaadka qaba ee halkaas yaal, waxaan shaki ku jirin in biyuhu yihiin lambar 1. Kama tartami karto dhadhanka xulashooyinka kor ku xusan, laakiin waxaad marwalba ku dari kartaa taabasho shaqsiyeed si aad ugu darto racfaankeeda. Liin dhanaanta ayaa ka mid ah maaddooyinka loogu isticmaalka badan yahay in lagu dhadhamiyo biyaha iyadoo la kordhinayo waxtarrada caafimaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cabitaano caafimaad leh
Khamri cas oo caafimaad qaba? Aynu aragno haddii aan wax yar ka sii akhrinno, ku talinno aalkolo iyadoo aan loo eegin inta resveratrol khamri cas ay leedahay.